E Belatala Peeji Ole Ụlọ Nche na Teta! Na-adị, ma Ha Adịkwuola n’Ọtụtụ Asụsụ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fante Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hungarian Iban Igbo Indonesian Italian Japanese Kannada Kimbundu Kinyarwanda Korean Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Norwegian Nzema Persian Polish Portuguese Rarotongan Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tarascan Totonac Tsonga Turkish Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Uzbek Valencian Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Malite na Jenụwarị 2013, Teta! na Ụlọ Nche nke anyị na-enye ọhaneze ga na-adịzi peeji iri na isii kama ịdị peeji iri atọ na abụọ.
Ndị nsụgharị ga-enwezi ike ịsụgharị ha n’ọtụtụ asụsụ n’ihi na e belatala peeji ole ha na-adị. Dị ka ihe atụ, a sụgharịrị Teta! Disemba afọ 2012 n’asụsụ iri asatọ na anọ, sụgharịakwa Ụlọ Nche Disemba afọ 2012 n’asụsụ otu narị na iri itoolu na ise. Ma, a sụgharịrị Teta! Jenụwarị afọ 2013 n’asụsụ iri itoolu na asatọ, sụgharịakwa Ụlọ Nche Jenụwarị afọ 2013 n’asụsụ narị abụọ na anọ.
Ụlọ Nche nke Ndịàmà Jehova na-eji amụ ihe n’ọgbakọ ha ka ga na-adị peeji iri atọ na abụọ.
Ọ Ga-eme Ka A Na-enwekwu Isiokwu Ndị Ga Na-agba n’Ịntanet
N’ihi mbelata a e belatara peeji ole akwụkwọ ndị a na-adị, o nwere ihe abụọ anyị ga-eme n’adres Ịntanet anyị bụ́ www.jw.org/ig.
Isiokwu ụfọdụ na-agbabu n’Ụlọ Nche na Teta! ga na-­agbazi naanị na jw.org ebe a. Ụfọdụ n’ime ha bụ, “Ihe E Ji Akụziri M Baịbụl,” “Maka Ndị Na-eto Eto,” na akụkọ gbasara ndị gụcharala akwụkwọ n’ụlọ akwụkwọ Gilied. Ha na-agbabu n’Ụlọ Nche nke ọhaneze. Isiokwu ndị ọzọ ga na-adịkwa ebe ahụ bụ isiokwu ndị na-agbabu na Teta! Ha bụ: “Ihe Ezinụlọ Ga-atụle,” na “Ndị Na-eto Eto Na-ajụ, Sị.”
Anyị ga na-etinyezi Ụlọ Nche na Teta! na jw.org/ig ma mee ha otú mmadụ ga-enwe ike ịnọ ebe ahụ gụọ ha. Kemgbe ọtụtụ afọ, anyị na-etinye Ụlọ Nche na Teta! na jw.org naanị n’ụdị PDF, ya bụ, nke e nwere ike ịdanlodu adanlodu. Ma ugbu a, anyị ga na-etinyekwa ha n’ụdị HTML, ya bụ, nke mmadụ nwere ike ịnọ n’Ịntanet gụọ. Ọ ga-emezi ka ọ dịrị ndị mmadụ mfe iji kọmputa ha ma ọ bụ ekwentị ha na-agụ ha n’Ịntanet. Anyị ga-emekwa ka ọ dịrị mmadụ niile mfe ịnọ n’Ịntanet na-agụ akwụkwọ anyị ndị ọzọ. Akwụkwọ anyị ndị a dị n’ihe dị ka narị asụsụ anọ.